Zavatra Mila Ampianarina ny Ankizy: Mianatra avy Amin’ny Olon-dehibe
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Boligara Boulou Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Ngangela Norvezianina Nyaneka Nyungwe Népali Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tok Pisin Tseky Tshwa Tuvalu Twi Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Mila olon-dehibe hitari-dalana sy hanoro hevitra azy ny ankizy. Ny ray aman-dreny no tena tokony hanao an’izany. Afaka manampy koa anefa ny olon-dehibe hafa.
Tsy dia mifanerasera amin’ny olon-dehibe ny ankizy, any amin’ny tany maro. Eritrereto izao:
Lany any am-pianarana ny ankamaroan’ny fotoanan’ny ankizy mandritra ny andro. Ny ankizy anefa no tena betsaka any, raha oharina amin’ny mpampianatra.
Tsy mahita ny ray aman-dreniny ny ankizy sasany rehefa mody avy mianatra, satria samy miasa izy mivady.
Mandany adiny enina eo ho eo isan’andro amin’ny fitaovana elektronika ny ankizy 8 ka hatramin’ny 12 taona, any Etazonia, araka ny fanadihadiana iray. *
Hoy ny boky Aza Afoy ny Zanakao (anglisy): “Tsy any amin’ny ray aman-dreniny, na mpampianatra, na olon-dehibe hafa ny tanora no maka torohevitra, fa any amin’ireo ... mitovy taona aminy. Ireny koa no ataony modely.”
Manokàna fotoana hiarahana aminy.
TORO LALANA: “Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany.”—Ohabolana 22:6.
Efa voajanahary amin’ny ankizy ilay hoe mitady ny tari-dalan’ny ray aman-dreniny. Na dia rehefa mihalehibe aza izy, dia mbola ny torohevitry ny ray aman-dreniny ihany no tiany kokoa noho ny an’ireo mitovy taona aminy. Hoy ny Pr. Laurence Steinberg, ao amin’ilay boky hoe Ianao sy ny Zanakao (anglisy): “Tian’ny zanakao ho fantatra ny hevitrao, ary henoiny izay lazainao na dia tsy ekeny daholo aza.”
Omeo tari-dalana àry ny zanakao, satria izany mihitsy no tadiaviny. Manokàna fotoana hiarahana aminy, ary resaho aminy ny hevitrao, sy izay zava-dehibe aminao, ary ny zavatra niainanao.
Mitadiava olona hanoro hevitra azy.
TORO LALANA: “Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry.”—Ohabolana 13:20.
Iza ny olon-dehibe hitanao hoe azo itokisana sady afaka ny ho modely ho an’ny zanakao? Maninona izy raha iangaviana mba hanokana fotoana hiarahana amin’ny zanakao? Mbola andraikitrao foana anefa ny mitaiza ny zanakao, fa manampy fotsiny ilay olona. Miresaka ny ohatr’i Timoty sy ny apostoly Paoly ny Baiboly. Na dia efa olon-dehibe aza i Timoty, dia tena nahasoa azy ny niaraka tamin’i Paoly. Na i Paoly koa aza nandray soa.—Filipianina 2:20, 22.
Betsaka izao ny fianakaviana lasa tsy miara-mipetraka fa mifanalavitra. Mety ho lavitra ny zanakao àry ny dadabe sy bebeny, na ny dadatoa sy nenitoany. Inona no azonao atao raha izany? Mitadiava olon-dehibe hafa manana toetra tsara tianao hotahafin’ny zanakao.
^ feh. 9 Ny tanora 13 ka hatramin’ny 19 taona indray mandany adiny sivy eo ho eo isan’andro amin’ny fitaovana elektronika, araka ilay fanadihadiana. Tsy tafiditra amin’ireo tatitra roa ireo ny fotoana ampiasany fitaovana elektronika, mba hanaovana devoara na hanaovana fikarohana ao amin’ny Internet.
Raha zatra mitady tari-dalana amin’ny olon-dehibe ny ankizy, dia azo inoana fa ho matotra sy hahay hanapa-kevitra izy rehefa lehibe
Manome ohatra tsara ho an’ny zanako ve aho?
Hitan’ny zanako ve hoe izaho koa mba mangataka torohevitra amin’ny olona matotra kokoa?
Manokana fotoana hiarahana amin’ny zanako ve aho, mba hampisehoana hoe sarobidy amiko ry zareo?
“Eo am-panaovan-javatra aho, indraindray, no miteny ny zanako vavy hoe te hiresaka amiko, hono, izy. Mihaino azy foana aho rehefa hoatr’izany. Misy fotoana fotsiny izy asaiko miandry kely, amin’izay aho afaka mifantoka tsara amin’ilay resaka. Miezaka manome ohatra tsara koa izahay mivady, amin’izay hitany hoe izahay koa mba mampihatra ny zavatra ampianarinay azy.”—David.
“Rehefa teraka ny zanakay vavy, dia nanapa-kevitra izahay mivady hoe tsy hiasa aho fa hitaiza azy. Tsy nanenenako mihitsy izany. Tokony hanokana fotoana faran’izay betsaka hiarahana amin’ny zanany ny ray aman-dreny. Hahazo tari-dalana tsara izy amin’izay. Ho hitany koa hoe sarobidy aminao izy.”—Lisa.
ILAINY NY MIFANERASERA AMIN’NY OLON-DEHIBE
“Nifanerasera tamin’ny olon-dehibe isan-karazany ny zanako, dia lasa mivelatra kokoa ny fahitan’izy ireo ny fiainana. Gaga be, ohatra, ry zareo rehefa nitantara ny fahazazany ny bebeko. Ny fianakavian-dry zareo, hono, no voalohany nampiasa jiro mandeha herinaratra tamin’izany. Dia tonga tao an-tranon-dry zareo mihitsy ny mpiara-monina mba hijery an’ilay izy. Nijoro tao an-dakozia ny olona, dia nijery an’ilay jiro nampirehetina sy novonoina. Lasa hitan’ny zanako hoe hay hafa mihitsy ny fiainana taloha. Nahatonga azy ireo hanaja an’i Bebe sy ny zokiolona hafa koa izany. Hiana-javatra betsaka avy amin’ny olon-dehibe ny ankizy, raha mifanerasera amin’izy ireny fa tsy amin’ny tanora ihany.”—Maranda.
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! No. 2 2019 | Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
No. 2 2019 | Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
MIFOHAZA! No. 2 2019 | Zavatra Enina Mila Ampianarina ny Ankizy
Miezaha Hinamana Amin’ny Olona Tia An’i Jehovah